337 views 2018-05-02
Each month, we will askaGEN member, friend or staffer for some insight into their p... Read More.
142 views 2018-05-01
၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီလအတွက်လစဉ်သတင်းလွှာ ရယူဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ။ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကာလနဲ့အတူ အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကိစ္စများကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့... Read More.
294 views 2018-04-03
၂၀၁၈ခုနှစ် မတ်လအတွက်လစဉ်သတင်းလွှာ ရယူဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ။ မတ်လဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့နှင့် အတူ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးနဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးပွဲများစွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သော လတစ်လလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
GEN Monthly Newsletter for March, 2018 (English)
302 views 2018-04-02